Macalin Ilkacase iyo xubno kale oo saakay lagu toogtay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Macalin Ilkacase iyo xubno kale oo saakay lagu toogtay Muqdisho
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay maanta dil toogasho ah ku fulisay Maxamed Xaaji Axmed (Macalin Ilkacase) iyo Labo kale oo ka tirsanaa Kooxda Al-shabaab.
MUQDIHSO, Soomaaliya - Toogashadaan ayaa ka dhacday barxadda dugsiga Jeneraal Kaahiye ee Muqdisho, waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Labada kale ee lala toogtay Macalin Ilkacase ayaa lagu kala magacaabaa Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Saciid Maxamed oo ay maxkamaddu ku eedeysay iney ka wada tirsanaayeen dhammaantood Kooxda Al-shabaab ah oo ka shaqeynaysay dilka dadka.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 19-kii Bishii July ee sanadkii 2019 waxaa ay xukun dil toogasho ah ku riday Macalin Ilkacase & Xubno kale, kadib markii ay racfaan ka qaateen xukun dil ah oo horay loogu riday, kuwaas oo Maxkamadu sheegtay inay dilal qorsheysan iyo weerar kal geysteen Magaalada Muqdisho.
Baraha bulshada ayaa maanta aad looga hadalhayaa toogashada Macalin Ilkacase, maadaama dadku ay daawadeen barnaamij uu ka diyaariyey TV-ga dowladda oo uu kaga hadlay arrimo badan oo dadka argagax ku beeray.